Igumbi elitofotofo kunye nosapho kunye nekati. - I-Airbnb
Igumbi elitofotofo kunye nosapho kunye nekati.
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguAstrid
Igumbi libekwe kumgangatho osezantsi wendlu ezimeleyo kwidolophu entle yaseBad Sauerbrunn. Wabelana ngendlu nam (iAstrid), intombi yam kunye nekati yethu. Kwigumbi kukho igumbi lokuhlambela labucala, elinokufikeleleka kuphela kwigumbi. Ngaphantsi kukho nekhitshi negumbi lokuhlala. (Amagumbi ethu okulala akumgangatho wokuqala, ngoko akukho zinto ziyimfihlo ngokwaneleyo)
Igumbi lihonjiswe ngothando, libonakala kakuhle. Ukusuka efestileni enkulu ungabona ngqo egadini yethu. Igumbi lokuhlambela lineshawa, indlu yangasese, isinki kunye neetawuli. Izolile kwaye iyahambelana, ngamanye amaxesha kuphela ukuzola kwesandi seentaka okanye iingcongconi kuphazamisekile;)
IBad Sauerbrunn yayiyindawo ethandwayo yokuhlaziya ihlobo leentsapho ezityebileyo zaseViennese ngasekupheleni kwenkulungwane kwaye le ndawo isemoyeni. Ngenxa yamanzi aphilisayo, le ndawo iphinde ifumaneke njenge- "spa resort." Ukususela kwiindlela zokuhamba ngebhayisekile kunye neendlela zokunyuka intaba ukuya kwimicimbi yasehlotyeni, uluhlu lwezinto onokuzenza kufuneka lunike ibhinqa okanye indoda nganye. Ukuba awuthandi ukuzikhupha, ungalivumela ilanga ligqame kwisisu sakho kwipuli yokuqubha ephandle okanye wonwabele iDolce Vita kwisikwere esihle kunye nekofu. Ukongezelela, iBad Sauerbrunn ikumgama wokuba ungahamba ngeenyawo ukuya kumabala omthendeleko weWiesen: kwimizuzu eyi-30 uhamba ngeenyawo ubuyela ekhaya kwaye uzimele iiteksi okanye iindawo zokukhwela. Ngoko eli gumbi lilungele iindwendwe zeminyaka yonke. Zibonele ngokwakho: www.bad-sauerbrunn.at
Uza kundibona kunye/okanye intombi yam izihlandlo eziliqela njengoko ndisebenza ndisekhaya kakhulu. Ixesha elininzi imini yethu iqala ekuseni kakhulu, kodwa ungayivumeli loo nto ikukhathaze.